HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Galoà Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Norvezianina Nzema Oromo Ouïgour (Sirilika) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Vezo Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Olona 257 294 tany amin’ny firenena 21 no nanatrika ny fivoriana faha-129 nataon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, tamin’ny asabotsy 5 Oktobra 2013. Ny sasany nanatrika mivantana, fa nisy kosa nanaraka an’ilay izy tamin’ny video nampitaina tamin’ny alalan’ny Internet. Naverina nalefa indray ilay video ny ampitson’iny, ka nisy Vavolombelona hafa koa nijery an’ilay izy. Nahatratra 1 413 676 ny isan’ny mpanatrika tany amin’ny firenena 31, raha atambatra. Iny no fivoriana be mpanatrika indrindra nalamin’ny Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izay. Mbola betsaka izany raha oharina amin’ny nanatrika an’ilay fandaharana manokana natao tany Meksika sy Amerika Afovoany, izay niisa 1 327 704, tamin’ny 28 Aprily 2013.
Efa tamin’ny 1920 tany ho any, ny Vavolombelon’i Jehovah no nandefa mivantana ny fivoriamben’izy ireo tamin’ny alalan’ny telefaonina sy radio, ka olona maro eran-tany no afaka nanaraka an’izany. Efa mandroso be izao ny Internet ka na ny olona any amin’ny toerana mitokana aza dia afaka mahita sy mandre izay zava-mitranga eo no ho eo, na tsy ela aorian’izay. Vavolombelon’i Jehovah mipetraka any Etazonia i William. Nisy fivoriambe nalamina tany Richmond, tamin’ny 1942. Afaka nanaraka ny fandaharana izy tamin’izay saingy tamin’ny alalan’ny telefaonina. Hoy izy rehefa nampitaha an’izany tamin’ilay fivoriana fanao isan-taona tamin’ny 2013: “Mandray soa kokoa ianao rehefa hitanao mihitsy ilay fandaharana. Tena mbola tsy nisy hoatran’iny mihitsy hatramin’izay.”
Vavolombelona avy any amin’ny sampana maromaro no niasa mafy mba hanomanana ny fandefasana an’ilay video. Niasa nandritra ny herintaona mahery izy ireo, ary nandany ora an’arivony maro. Tany Brooklyn, any Etazonia, no nandrindrana an’ilay fampitana mivantana. Niasa andro aman’alina ireo teknisianina tany, tamin’ny faran’ny herinandro nandefasana an’ilay video, satria samy hafa ny ora any amin’ireo tany 31. Hoy i Ryan, izay nanampy tamin’ny fanomanana ny fandefasana an’ilay video sady nanara-maso ilay izy: “Zara raha natory izahay nefa tsy nampaninona anay izany, satria fantatray hoe be dia be ny handray soa amin’ilay fandaharana.”
Ahoana no Fomba Fiasan’ilay Video Ampitaina Amin’ny Alalan’ny Internet?
Misy kamerà maromaro maka video an’ilay fandaharana ary mandefa an’izany any amin’ny fitaovana mandrindra ny sary sy ny feo, mba hifantenana hoe iza amin’ireo sary no tsara indrindra. Atambatra ho video tokana ilay izy avy eo ary alefa any amin’ny foibe mandrindra an’ilay fampitana mivantana, any Brooklyn. Any indray no amboarina ilay video mba hamoaka sary somary ratsiratsy na tsara na tena tsara.
Mandalo ao amin’ny ordinatera avy eo ilay video ary zarazarainy ho ampahana video folo segondra avy, mba ho azo halefa amin’ny alalan’ny Internet. Nasiana fitaovana afaka mandika sy mitahiry an’ireo ampahana video ireo avy ao amin’ny Internet, any amin’ny toerana hijerena an’ilay fandaharana. Io fitaovana io indray avy eo no manambatra azy ireo ho lasa video mandeha tsara. Afaka mahita sy mandre an’ilay fandaharana ny mpanatrika, rehefa afaka 30 ka hatramin’ny 60 segondra eo ho eo.
Ahoana raha miadana be ny fiasan’ny Internet? Avadik’ilay fitaovana ho lasa sary somary ratsiratsy kokoa avy hatrany ilay video, ary averiny ho sary tena tsara ilay izy avy eo rehefa miverina amin’ny laoniny ny fiasan’ny Internet. Na dia tapaka tanteraka aza ny Internet, dia mbola mandeha foana ilay video satria izay sary manaraka efa notehirizin’ilay fitaovana indray no alefany. Tsy ho tsikaritry ny mpanatrika akory hoe nisy olana ara-teknika, raha tsy maharitra ela loatra ilay fahatapahana. Mety hisy olana maro ny fampitana video amin’ny alalan’ny Internet. Efa nisy zavatra natao anefa mba tsy ho be loatra ny olana ara-teknika.
Foiben’ilay fandaharana: Efitrano Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah any New Jersey, Etazonia. Mpanatrika: 4 732.
Be mpanatrika indrindra: Perth, any Aostralia. Mpanatrika: 7 186.
Farany avaratra: Fairbanks, any Alaska. Mpanatrika: 255.
Farany atsimo: Invercargill, any Nouvelle-Zélande. Mpanatrika: 190.
Lavitra indrindra: Perth, any Aostralia, any amin’ny 18 700 kilaometatra eo ho eo avy any New Jersey.
Ireo nanaraka an’ilay fandaharana tany Katherine, Faritany Avaratr’i Aostralia